Radio Don Bosco - Provinsy MDG
Naseho ny : 25 desambra 2021
Tsy tanjona ny voadin-drelijiozy fa fiainana sy firosoanana
Naseho ny : 9 septambra 2021
Notontosaina ny alarobia 8 septembra 2021 ny voady voalohany nataon'ireo Novisy Salezianina miisa 22 mirahalahy. Notanterahina tao Ivato, "Notre Dame de Clairvaux" izany fankalazana izany. Nanomboka tamin'ny 8 ora sy sasany maraina ny Sorona Masina izay notarihin'ny Mompera Bizimana Innocent, lehiben'ny Fikambanana Salezianina eto Madagasikara sy ny nosy Maorisy. Teny manentana azy 22 mirahalahy ny hoe : "Ho voninahitra ho an'ny Raiko raha mamoa be ianareo sy tonga mpianatro" (Joany 15, 8).
Provinsialy Malagasy voalohany
Nosoratan'i Filles de Marie Auxiliatrice
Lohahevitra : FMA
Naseho ny : 6 aogositra 2021
Noraisina tamin’ny fomba ofisialy ny 06 aosgositra 2021 i Sr Rafaraonisoa Blandine, malagasy voalohany voatendry ho lehiben’ny Fikambanana Masera Filles de Marie auxiliatrice eto Madagasikara- Province "Marie Source de vie". Haharitra enin-taona ny fotoam-piasany.
Sr rafaraonisoa blandine
Mariesource de vie
Pejy 1 amin'ny 5